Dagon Exhibitons Limited - News & Events - Myanmar Exhibitions, Fair, Events, Conference management, Events Promotion Design and Planning
အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနနှင့် PTTEP International Limited (Yangon Branch) တို့ပူးပေါင်း၍ ရန်ကင်းကျွမ်းကျင်မှုလေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းကျောင်းတွင် ဖွင့်လှစ်သော အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာရပ်များကို အသက် (၁၈) နှင့် ပြည့်သူတိုင်း (ကျား/မ) အခမဲ့ တက်ရောက်ခွင့်ရှိကြောင်း သိရပါတယ်။ Read More
ခန့်မှန်းငွေ ၇ ဘီလီယံကျော်ဖြင့် ရန်ကုန်-မန္တလေးအမြန်လမ်းသို့ တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်မည့် လမ်းသစ်တစ်ခု ၂ နှစ်အတွင်း ဖောက်လုပ်ရန် စီစဉ်နေ
အနောက်ဘက် မြို့ရှောင်လမ်းမှ ရန်ကုန်-မန္တလေးအမြန်လမ်းသို့ ချိတ်ဆက်မည့်လမ်းသစ်ဖောက်လုပ်နိုင်ရန် ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ် ၇ ဘီလီယံကျော်ဖြင့် လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး စီစဉ်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ ရန်ကုန်-မန္တလေးအမြန်လမ်းသို့ တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်မည့် လမ်းသစ်တစ်ခုဖောက်လုပ်နိုင်ရေး လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးပွဲကို ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၀ ရက် နံနက် ၁၀ နာရီအချိန်က ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရုံး တော်ဝင်ဟံသာခန်းမ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည်။ Read More
Afterapause of eight years, France is going to expand existing investments and make new ones in Myanmar,asenior official of the Myanmar Federation of Chamber of Commerce and Industry (UMFCCI) has revealed. Read More
ယခင်က အပေါင်ပစ္စည်းရှိမှသာ ဘဏ်များထံမှ ငွေချေးနိုင်ခဲ့သော်လည်း ယခုအခါ ထိုမူဝါဒကိုပြင်ဆင်ပြီး စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် အပေါင်ပစ္စည်းမဲ့ချေးငွေများကို ဗဟိုဘဏ်ကခွင့်ပြုထားပြီးဖြစ်ကြောင်း စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးဆက်အောင်က ပြောခဲ့ပါတယ်။ Read More
Energy consumption in Southeast Asia has dramatically increased due to its fast-growth economies. To meet the demand, electricity generation fromavariety of alternative energy to fossil fuels is sought for energy security and environmental sustainability. Read More
Posco International, the trading arm of Korea’s leading steel manufacturer, Posco, is already seeingaprofit from its gas production project in the Southeast Asian country. Read More
၄) ခန္းထက္ ပိုေဆာက္သည့္ ကန္ထ႐ိုက္တိုက္မ်ား ကိုယ္ပိုင္ထရန္စေဖာ္မာတပ္ဆင္ရမည္ဟု YESC ထုတ္ျပန္" ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးအတြင္း ေဆာက္လုပ္ဆဲ ကန္ထ႐ိုက္ တ္ုက္မ်ား ဓာတ္အားရရိွေရးအတြက္ တိုက္ခန္း(၄)ခန္းအထက္ ပိုမိုေဆာက္လုပ္ထားၿပီး Read More
(၄) ခန္းထက္ ပိုေဆာက္သည့္ ကန္ထ႐ိုက္တိုက္မ်ား ကိုယ္ပိုင္ထရန္စေဖာ္မာတပ္ဆင္ရမည္ဟု YESC ထုတ္ျပန္" ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးအတြင္း ေဆာက္လုပ္ဆဲ ကန္ထ႐ိုက္ တ္ုက္မ်ား ဓာတ္အားရရိွေရးအတြက္ တိုက္ခန္း(၄)ခန္းအထက္ ပိုမိုေဆာက္လုပ္ထားၿပီး ဓာတ္အားသတ္မွတ္ယူနစ္ထက္ ေက်ာ္လြန္ သံုးစဲြေသာတိုက္မ်ားအေနနွင့္ ကိုယ္ပိုင္ထရန္စေဖာ္မာ တပ္ဆင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္း YESC မွ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာဦးသန္႔ဇင္က News Watch သို႔ ၾသဂုတ္ (၁၁)ရက္တြင္ ေျပာသည္။ Read More
ကနဦးေပးသြင္းေငြထည့္စရာမလိုဘဲ ေလး ႏွစ္ကေန ၁၄ ႏွစ္အထိအရစ္က်ဘဏ္ေခ်းေငြစနစ္နဲ႔ ေရာင္းခ်ေပးမယ့္ ဧရာခ်မ္းသာအိမ္ရာစီမံကိန္း အတြင္းက အိမ္ခန္းေတြကို စတင္ဝယ္ယူႏိုင္ၿပီလို႔ သိရပါတယ္။ ‘အိမ္ခန္းေတြကို ကေမၻာဇဘဏ္နဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး အရစ္က်ပံုစံနဲ႔ ေရာင္းခ်ေပးတာ ၊down-payment ေပးစရာမလိုတဲ့ ဝယ္ယူမႈကိုေတာ့ ေလးႏွစ္နဲ႔ ၁၄ ႏွစ္သတ္မွတ္ထားၿပီး ေရာင္းခ်ေပးတယ္၊ downpayment ေပး ဝယ္ယူတာ ကိုေတာ့ ႏွစ္ႏွစ္သတ္မွတ္ေရာင္း ခ်ေပးထားတယ္”လို႔ ဧရာခ်မ္းသာ အိမ္ရာစီမံကိန္းက တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ရွင္းျပပါတယ္။ Read More
Showing 1 -9of9Articles < Previous 1 Next >